I-Apple ikhupha i-WatchOS 4.0.1 kuphela kuthotho 3 ukulungisa imiba yokunxibelelana kwe-LTE | Ndisuka mac
I-Apple ikhupha i-watchOS 4.0.1 kuthotho 3 kuphela ukulungisa imiba yokunxibelelana ne-LTE
Asiyi kuba nohlobo lwe-LTE ye-Apple Watch uthotho 3 eSpain ubuncinci kude kube ngu-2018, njengoko iApple igqibezela iinkcukacha nabaqhubi beefowuni. Kuyihlazo ukungakwazi ukonwabela imisebenzi ye-LTE kwi-Apple Watch, kodwa okwangoku siyalibala malunga nokuphazamiseka okuncinci okuvela nemveliso entsha.
Enye yazo inento yokwenza nonxibelelwano lweWi-Fi kuthotho 3, ngakumbi uqwalaselo lonxibelelwano. Kuba unxibelelwano lweWi-Fi lisebenzisa amandla amancinci kunonxibelelwano lwe-LTE, I-Apple Watch isetiwe ukuba iqhagamshele ngokukhawuleza kunxibelelwano lwe-Wi-Fi.
Ngoku kuninzi ukunxibelelana koluntu (iivenkile zokutyela, iihotele, amaziko okuthenga, njl.njl.), Kodwa kufuneka sibhalisele le nkonzo. Ke ngoko, uthotho lwe-Apple Watch 3 luzama ukunxibelelana ngaphandle kokukhuphela idatha kwaye lishiyeke kwilimbo.
Ke ngoko, iApple ifumene lo mbandela ngabasebenzisi kwaye iyilungisile le mpazamo kwi 4.0.1 version. I-Apple Watch iya kukhangela iinethiwekhi ezaziwayo ze-Wi-Fi kuqala. Le nguqulo iyafumaneka ukhuphelo ngokusebenzisa usetyenziso lwayo olusemthethweni kwi-iPhone. Amanqaku ohlaziyo afanayo ayathetha ngokulungisa iimpazamo kunxibelelwano lweWi-Fi, ebeka phambili kunxibelelwano lwe-LTE xa sijonge inethiwekhi yoluntu.
Siza kubona ukuba eli nyathelo alonakalisi kakubi ukusetyenziswa kwebhetri, eyi-workhorse kwi-Apple Watch. Ngale ndlela, abasebenzisi bokuqala babonisa ubomi bebhetri obude kuneenguqulelo zangaphambili.
Nangona kunjalo, le nguqulo ayigqibelelanga, ukuba siqala kwisithembiso sika-Apple sokusizisela umculo kwi-LTE, ubuncinci ngenkonzo ye Apple Music. Kwakhona, enye usetyenziso lomculo, ezinje ngezicelo zokumamela kwizikhululo zikanomathotholo, ziya kufumaneka kuhlobo oluzayo 4.1 yi-watchOS, esinethemba lokuyibona kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ikhupha i-watchOS 4.0.1 kuthotho 3 kuphela ukulungisa imiba yokunxibelelana ne-LTE
Nge-Movie Sherlock Pro unokuzikhuphelela kwaye uququzelele zonke iividiyo zakho
I-Apple yandisa inani leebhanki ezixhasa iApple Pay